87/10 (30.1 ov)
90/7 (18.3 ov)
233/6 (50.0 ov)
Kathmandu Mayor’s XI
Kathmandu Mayor’s Cup 2021
Prime Minister Cup 2021
Prime Minister Cup Women’s National T20 2020/21
Gautam Buddha Cup 2020
by cricnepal.com Staff
November 2, 2020 - Updated on February 18, 2021
इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्स क्वालिफायर्समा स्थान बनाएको छ । लिग चरणको अन्तिम खेलमा दिल्लीले रोयल च्यालेञ्जर्स बैंग्लोरलाई ६ विकेटले हरायो । यो हारपछि पनि बैंग्लोरको शिर्ष चारमा रहने पक्का जस्तै छ ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बैंग्लोरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १ एक सय ५२ रन बनायो ।
बैंग्लोरका लागि देवदत्त पडीक्कलले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ४१ बलमा ५० रन बनाएका थिए ।
एवि डिभिलियर्सले ३५ रन बनाएर रन आउट हुँदा दुई छक्का र एक चौका प्रहार गरे ।
उनले २१ बल फेस गरेका थिए । कप्तान विराट कोहली २९ तथा शिबम दुवेले १७ रन बनाए । यसैगरी जोस फिलिपे १२ रनमा पभेलियन फर्किएका थिए ।
दिल्लीका एनरिच नोर्टजेले तीन विकेट लिँदा कागिसो राबडाले दुई विकेट हात पारे ।
जवाफमा दिल्लीले १९ ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो ।
राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको दिल्लीले १९ रनमा पहिलो विकेट गुमायो । उसका ओपनर पृथ्वी शा मात्र नौ रनमा आउट भए ।
तर त्यसपछि अजिन्क्या राहाण र शिखर धवनले ८८ रनको साझेदारी गर्दै टिमको पारीलाई सम्हालेका थिए । जसमा धवनले अर्धशतकीय पारी खेले ।
उनले ४१ बलमा ५४ रन बनाए । त्यसपछि कप्तान श्रेयस ऐयरपनि मात्र सात रनमा आउट भएपछि दिल्लीले एक सय ३० रनमा तेस्रो विकेट गुमायो । लगत्तै राहाणेपनि ६० रनमा आउट भए । उनले ४६ बलमा पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गरेका थिए ।
अन्तिममा मार्कुस स्टाेनिस र रिसभ पन्तले टिमलाई जित दिलाए । जसमा स्टाेनीसले १० रन बनाए भने पन्तले ८ रनकाे याेगदान गरे ।
याे जितपछि दिल्लीले १४ खेलमा १६ अङ्क बनाएकाे छ । तेस्रो स्थानमा बैंग्लोर रहेको छ । यदि भोली हैदरावादले मुम्बईलाई हरायो भने रनरेटका आधारमा कोलकाताको यात्रा लिग चरणमा रोकिने छ । किनकी कोलकाता रनरेटमा बैंग्लोर भन्दा पछाडी रहेको छ । याे हारपछि बैंग्लोर शिर्ष चारमा रहने पक्का भएको छ ।
Tags: Delhi CapitalsRoyal Challengers Bangalore
म्याक्सवेल १४ कराेड २५ लाखमा बैंगलाेरमा अनुबन्ध
स्मिथ दिल्लीमा अनुबन्ध
दिल्ली क्यापिटल्सबाट सन्दिप रिलिज
पाँचाै पटक मुम्बई आइपीएलकाे च्याम्पियन
आइपीएल फाइनल: दिल्लीले दियाे १५७ रनकाे लक्ष्य
आईपीएलको फाइनलमा दिल्ली क्यापिटल्स टस जितेर पहिला ब्याटिङमा
जिम्बावेले पाकिस्तानलाई दियाे दुई सय ७९ रनको लक्ष्य
पाकिस्तानविरुद्धकाे अन्तिम खेलमा जिम्बावे विजयी
Scorecard | Series Home
155/10 (42.1 ov)
156/5 (23.5 ov)
258/7 (50 ov)
263/9 (49.5 ov)
244/9 (50.0 ov)
150/10 (34.3 ov)
72/10 (25.2 ov)
70/10 (27.2 ov)
नेपाल पुलिसकाे दोस्रो जित
बागमती प्रदेशले एपीएफलाई दुई सय ३४ रनको लक्ष्य
त्रिभुवन आर्मीले नेपाल पुलिसलाई मात्र ८८ रनको लक्ष्य
© cricnepal.com 2010-2021. Made with ♥ in Nepal. Powered by Namastech Interactive Pvt. Ltd. | Digital Marketing by Neypal